Thwebula Ad-Aware Free Antivirus+ 11.7.485.8398 – Vessoft
Thwebula Ad-Aware Free Antivirus+
Ad-Aware Free Antivirus + – a software ukuvikela ikhompyutha yakho ezinsongweni ehlukahlukene. Izici main of the software zihlanganisa ukuvikelwa malware kanye virus ezahlukene, okulandwayo ifayela evikelekile, updates okuhlungayo zokuphepha njll Ad-Aware Free unqulo wesi arab kuphela + ikuvumela ukuba afeze ukuskena ngokushesha, ephelele noma abakhethayo kohlelo futhi ubeka abatheleleke amafayela in ngokuhlukaniswa. Isofthiwe kuhlanganisa mode ekhethekile esivikela computer yakho ngibukele ifilimu noma ukuhlala umdlalo umthwalo sakugcina ohlelweni. Futhi, Ad-Aware Free unqulo wesi arab kuphela + kwenza ukusetha ikhodi yokuphepha ukuvikela software ekuhlaseleni bangaphandle kungenzeka ukushintsha izilungiselelo abanye abasebenzisi.
Isivikelo of the system
Ezimeni ezahlukene of ukuskena
The mode of umthwalo sakugcina ohlelweni
Ikhono ukusetha ikhodi yokuphepha
Amazwana on Ad-Aware Free Antivirus+:
Ad-Aware Free Antivirus+ Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... SUPERAntiSpyware 6.0.1232 Free Edition futhi Professional
Norton 2015 22.5.4.24 Security Premium futhi 2015 22.5.0.124 Security Delux
Antiviruses Antivirus software iphakethe sokuvikelwa multilevel computer. Isofthiwe zivikela amagciwane noma izinsongo ahlukahlukene kanye iqukethe firewall lokuvunyelenwe ngato.
English, Français, Español, Deutsch... AVZ 4.46
Antiviruses I Umbuso indawo unqulo wesi arab iwukudambisa spyware kanye adware. Isofthiwe uyakwazi ukubona izinhlobo ezahlukene trojans, izibungu backdoor.
Antiviruses Ithuluzi ukuthola nokususa amagciwane kanye malware. Isofthiwe uvumela ukuba aphilise amafayela onegciwane noma wazibeka ngokuhlukaniswa.
English, Українська, Français, Español... Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro futhi Internet
Antiviruses I unqulo wesi arab kuphela popular ziqinisekise ngokumelene izinsongo ahlukahlukene kanye amagciwane. Isofthiwe uyakwazi ukuvimba amarobhothi inethiwekhi futhi ukhawule ukufinyelela amawebhusayithi abadala.
English, Français, Español, Deutsch... Wise Disk Cleaner 9.41 Standard futhi Portable
English, Français, Español, Deutsch... EaseUS Todo PCTrans 9 Free futhi Pro
Amafayela Isofthiwe ukudlulisa idatha bese isofthiwe noma kusuke kukhompyutha eyodwa kuya kwenye ngokusebenzisa inethiwekhi wendawo noma ngokwakha isithombe ifayela.